Tag: imewe ux | Martech Zone
Ude: ux imewe
N'ime oge, atụmanya maka weebụsaịtị agbanweela. Atụmanya ndị a setịpụrụ ụkpụrụ maka etu esi arụ ọrụ onye ọrụ nke saịtị ga-enye. Site na nchọta engines na-achọ ịnye nsonaazụ kachasị mkpa na afọ ojuju na ọchụchọ, a na-echebara ụfọdụ ihe ogo echiche. Otu n'ime ihe kachasị mkpa n'oge a bụ ahụmịhe onye ọrụ (yana saịtị dị iche iche na-enye aka na ya.). Ya mere, enwere ike igosi na UX dị oke mkpa
2017 Web Design na Userdị Ahụmịhe Onye Ọrụ
Mọnde, Jenụwarị 23, 2017 Mọnde, Jenụwarị 23, 2017 Douglas Karr
Anyị nwere obi ụtọ na nhazi anyị gara aga na Martech mana anyị matara na ọ dị obere. Mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ nweghị ndị ọbịa ọhụụ ka ọ na-emebu. Ekwenyere m na ndị mmadụ rutere saịtị ahụ, chere na ọ dị ntakịrị n'azụ ya - ha wee chee na ọdịnaya ahụ nwekwara ike ịbụ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, anyị mụrụ nwa ọhụrụ. Anyị hụrụ nwa ọhụrụ ahụ n'anya, anyị rụsiri ọrụ ike